Izraelaca - 克罗地亚语 - 缅甸语 翻译和实例
您搜索了: izraelaca (克罗地亚语 - 缅甸语)
ထိုသို့ လေဝိသားတို့ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့ နှင့် တခြားစီခွဲထား၍၊ သူတို့သည် အထူးသဖြင့် ငါ့လူဖြစ်ရ ကြလိမ့်မည်။
လေဝိသားတို့ကို၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ အထဲက ရွေးကောက်၍ စင်ကြယ်စေလော့။
Sad odu Mojsije i Aron i skupe sve starjeine Izraelaca.
ထိုသူညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည် သွား၍ ဣသရေလအမျိုးသား အသက်ကြီးသူတို့ကို စုဝေးစေပြီးလျင်၊
Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu i ne pusti on Izraelaca.
သို့သော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ဖာရောဘုရင်၏နှလုံးကို ခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်၊ သူသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို မလွှတ်ဘဲနေပြန်လေ၏။
ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ဣသရေလအမျိုး၌ ကာလနာကို လွှတ်လိုက်တော်မူ၍ လူခုနစ်သောင်း သေကြ၏။
Takav je bio red putovanja Izraelaca svrstanih u svoje èete. Tako su putovali.
ထိုသို့ဣသရေလ အစဉ်အတိုင်း ချီ၍ ခရီးသွား ကြ၏။
"Nipoto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca.
လေဝိသားတို့ကို၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့် ရောနှော၍ မရေတွက်ရ။ စာရင်းထဲ၌ မသွင်းရ။
Ruka Izraelaca postajae sve tea Jabinu, kralju kanaanskom, dok ga nije napokon zatrla.
သူတို့သည် ထိုရှင်ဘုရင်ကို မဖျက်ဆီးမှီ တိုင်အောင် အစဉ်အောင်လျက် နေကြ၏။
Zato odvraæate srca Izraelaca da ne prijeðu u zemlju koju im je Jahve predao?
ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသော ပြည်သို့ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မကူးမသွားမည် အကြောင်း၊ သူတို့စိတ်ကို အဘယ်ကြောင့် ဖျက်ကြ သနည်း။
Ni ruke svoje nije pruio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili.
ဣသရေလအမျိုးသား မှူးမတ်တို့ကို အပြစ်ပေးတော်မမူ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မြင်ရသော် လည်း၊ စားသောက်လျက်နေကြ၏။
Moab se uvelike poboja toga naroda jer je bio brojan. Moaba obuze strah od Izraelaca.
ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် များပြားသော ကြောင့်၊ မောဘပြည်သားတို့သည် အလွန်ကြောက်ရွံ့ ကြ၍၊
Tada stie Davidu glasnik te mu javi: "Srce Izraelaca priklonilo se Abalomu."
သိတင်းပြောသောသူတယောက်သည် ဒါဝိဒ်ထံ သို့လာ၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ စိတ်နှလုံးသည် အဗရှလုံဘက်သို့ ပါသွားပါပြီဟု ကြားလျှောက်လေ၏။
Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca.
ထာဝရဘုရားမှာ ထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည် လူတို့ကို ပါရန်တောက စေလွှတ်လေ၏။ စေလွှတ်သောသူအပေါင်းတို့သည် ဣသရေလအမျိုး၌ အကဲအမှူးဖြစ်ကြ၏။
အဲဂုတ္တုလူတို့သည် အစေကျွန်ခံစေသော ဣသ ရေလအမျိုးသားတို့၏ ညဉ်းတွားမြည်တမ်းခြင်းအသံကို ငါကြားရပြီ။ ငါပဋိညာဉ်ကိုလည်း ငါအောက်မေ့၏။
Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca est stotina i jedna tisuæa i sedam stotina i trideset.
ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုး၊ စာရင်းဝင်သူ လူပေါင်း ကား ခြောက်သိန်း တထောင်ခုနစ်ရာငါးဆယ် ရှိ သတည်း။
Tako je èinio Abalom svim Izraelcima koji su dolazili na sud kralju. Time je Abalom predobivao srca Izraelaca za sebe.
ထိုသို့စီရင်တော်မူခြင်းကို ခံအံ့သောငှါ၊ ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့လာသော ဣသရေလအမျိုးသား အပေါင်းတို့အား အဗရှလုံပြု၍ သူတို့စိတ်နှလုံးကို ခိုးလေ၏။
Neka svojim prstom pokropi rtvenik istom krvlju sedam puta. Tako æe ga oèistiti od neèistoæa Izraelaca i posvetiti.
ယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌လည်း ထိုအသွေးကို လက်ညှိုးနှင့် ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် ဖြန်း၍ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့၏ မစင်ကြယ်သောအပြစ်မှ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းစေရမည်။
Ovo su postaje Izraelaca to ih prijeðoe kad iziðoe iz zemlje egipatske u svojim èetama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
မောရှေနှင့် အာရုန်စီရင်၍ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်လာသော ဣသရေလအမျိုးသား အလုံးအရင်းတို့ သည် ခရီးသွားခြင်း အကြောင်းအရာများကို၊
quero um suco de abacaxi (葡萄牙语>英语)kaikkeinpyhimpään (芬兰语>南非荷兰语)除草安全剂 (简体中文>英语)virulence (法语>阿拉伯语)na sa piling nya (他加禄语>英语)english (印地语>孟加拉语)tutturacaklarına (土耳其语>英语)power pop (英语>他加禄语)nudist girls pics (英语>俄语)dubbeltrycka (瑞典语>英语)reentrant (英语>德语)seribu bunga (印尼语>英语)lincolnshire (法语>荷兰语)did you mean? (英语>他加禄语)velamma episode5hindi download (印地语>英语)excessive visiting (英语>他加禄语)only you can complete me (英语>他加禄语)chameli flower (印地语>泰卢固语)zatem powodzenia (波兰语>英语)podstawienia (波兰语>英语)uurtje factuurtje (荷兰语>英语)when i count my blessings, i count you twice (英语>印地语)marcar (葡萄牙语>印地语)ajah (英语>印尼语)nevada asal (马来语>简体中文)